Dhaqaalaha Cusub: Iska Sii | Martech Zone
Dhaqaalaha Cusub: Sii
Sabtida, Oktoobar 7, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Google Blogoscoped warbixinno ku saabsan a Maqaalka Reuters in Raadinta Buugga cusub ee Google, halkaas oo ay ka baafinayaan buugaag ka mid ah xuquuqda daabacaadda oo ay internetka gelinayaan, runtiina waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta iibka buugaagta.
Raadinta Buugga Google waxay naga caawisay inaan baareyaasha ka dhigno macaamiil, ayay tiri Colleen Scollans, oo ah agaasimaha iibka khadka tooska ah ee Jaamacadda Oxford University Press.
Ma hubo sida erayga loogu dhawaaqo ifafaalaha, laakiin waxaan wax ka qoray isbeddelladan xoogaa. U siinta si aad lacag u hesho… sidee taasi ku dhacdaa? Hagaag, waa gabi ahaanba. Maaha nooc cusub. Iskusoo wada duuboo, idaacaduhu waxay na siiyeen heeso dadku tageen oo ay gadaal ka iibsadeen. Warshadaha muusikada waxay ka baqayaan soo dejinta, laakiin waa dagaal aan waxtar lahayn. Isbarbar dhigga barnaamijyada asaaggu waxay sii wadi doonaan inay kobciyaan oo ay bixiyaan qaab loo qaybiyo faylasha aan la ogaan. Maalinta ayaa iman doonta, ugu dhakhsaha badan, in RIAA ay tahay inay ka quusato raadinta dacwadaha oo ay dhisaan qaab ganacsi oo wanaagsan. Tan iyo markii aan noqday mid ka mid ah kuwii hore ee diidaya Napster / Metallica, waligey ma iibsan badeecad kale oo Metallica ah Ka horna, waxaan haystay Metallica wax walba… Ma hubo inta lacag ee Lars iyo shaqaaluhu ku lumiyeen iyagoo ka leexday mid ka mid ah taageerayaashooda, laakiin wax badan ayay ahayd. Haa, dhadhankeyga muusigga ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay… hadda waa yara jilicsan tahay. 🙂
Software waxba kuma kala duwana. Yahoo! dhawaan waxay xustay inay uqaybin doonaan codsigooda Email si xor ah si macaamiisha ay ugu dhisi karaan codsiyada hareeraheeda. Faa'iidada? Waxay adduunka ku faafinayaan tayada iyo hal-abuurnimada ganacsi ee ka baxsan darbiyada shirkaddooda. Markay dad aad u tiro badani dhisaan codsiyada, rabitaanka isticmaalka Yahoo! maadaama ISP xulashadu noqon doonto mid lama huraan ah. Waxaan ahay hal macmiil oo aan rabin inuu ka tago… aaladaha sida difaaca Virus-ka, kahortaga Spam, aaladaha kormeerka Waalidka, Daahfurka… dhammaantood waxay iga dhigayaan inaan doonayo inaan la joogo Yahoo DSL. Adeegga Pro-na waa mid fantastik ah, weligay ma helin maqnaansho ka badan daqiiqado.
Hadda buugaag! Kuwii idinka mid ah ee arkay oo akhriyay qoraalkayga waxay ogyihiin inaan ahay buundo buug. Ma lihi maktabad aad u ballaaran, laakiin waxaad ka helaysaa buugaag meel walba oo ku taal meeshayda. Waxaan si gaar ah u jeclahay buugaagta adag (sidaa darteed waxaan qirayaa inaan buugaag ugu iibsado daboolkooda). Quruxdeydii ugu dambeysay waa
Capote's Dhiig Qabow. Kadib markaan daawaday cajiib ah filim, waxaa igu kalifay inaan akhriyo buugga.
Blogs waa nooc kale oo lacag lagu siiyo. Waxaan aqriyay buugaag (aad u tiro badan) oo waxaan ka ururiyey aqoon badan oo ku saabsan Dhiirigelinta Mashiinka Raadinta, Warbaahinta Bulshada, Barnaamijyada, Maareynta, Hoggaaminta, iwm. Si layaab leh, waxaan dhawaan iibsaday buugga 'Set' ee ugu cusbaa… waxyaabaha laga ururiyey lagana abaabulay isaga blog… Oo waxaan iibsaday buugga ka dib markaan arkay iyadoo lagu xayeysiinayo boggiisa. Marka Seth horey ayuu ii siinayay… anna waan iibsaday sidoo kale! Lacag buu u bixiyey!
Bloggeygu wax badan kama soo qaado habka dakhliga tooska ah loo soo xareeyo. Si kastaba ha noqotee, waxay ii noqotay waddo fiican in aan gaaro xoogaa rajo iyo macaamiil ah. Waxaan ku faraxsanahay in aan sameeyo la-talin baraha bulshada ah, la-tashiga Suuq-geynta Macluumaadka, horumarinta Khariidadda Google, horumarinta WordPress, iyo la shaqeynta cusub ee Warbaahinta Bulshada ganacsi (wali waa horumar). Ganacsigan intiisa badan lama heli karin iyadoo aan la gaarin barteyda.
Dadka qaarkiis waxay u maleyn karaan in dhajinta aqoontaada internetka ay ku dhigeyso halkaas bilaash waxaadna fureysaa lacag. Waxa aan helay ayaa ah in dadka badankood aysan raadineynin inay 'xadaan' aqoonta; halkii, ay raadinayaan dad aqoon leh! Balooggu waa mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee macaamiishaada mustaqbalka la siin karo macluumaadka ay u baahan yihiin si ay kuugu helaan inaad u qalanto shaqaaleysiin ama la tasho
Tani waa dhaqaalaha cusub. Haddii aadan u bixin si aad lacag u hesho, qof kale ayaa bixin doona!
Douglas Karr Saturday, October 7, 2006 Tuesday, October 4, 2011
Qoraha WordPress: Ku dar Link Profile Link haddii aad gasho
Ku Kala Sooc Cuntadaada Sawirada
Oktoobar 7, 2006 at 11:32 PM
Hal dabagal ah this warkaan AllofMP3 ayaa garaacaya shabakada… degel sharci darro ah oo Ruush ah oo bixiya MP3 downloads aan lahayn maareynta xuquuqda dhijitaalka ah iyo qiime aad u jaban.
Maamulka AllOFMP3.com ma hayo macluumaad ku saabsan sharciyada waddan kasta, mana masuul ka yahay ficilada shisheeyaha adeegsada. ”
Waan jeclahay internetka!